Samitivej အက်ပ်များ - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ကျန်းမာသော မေမေ – ကိုယ်ဝန်ဆောင်လစဉ်
လတိုင်း လတိုင်းဟာ မိခင်တစ်ဦးဖြစ်လာဖို့အတွက် အတွေ့အကြုံအသစ်တွေကို ဆောင်ကြဉ်းပေးလာပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ရင်သွေးလေးဟာ တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက် ပြောင်းလဲလို့ လာနေသလို သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်း သူ့အတိုင်းပဲ
အလိုက်သင့်လေး ဖွံ့ဖြိုးလို့ လာနေပါတယ်။ ရင်သွေးငယ်လေးတွေဟာ မိခင်ရဲ့ သားအိမ်ထဲမှာ ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ ရှိနေပြီး ဘယ်လိုမျိုး ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ဆိုတာကို လေ့လာလိုက်ပါ၊ ပြီးတော့ အချို့သော အကျိုးရှိစွာ အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေနဲ့ ကျေနပ်လို့ နှစ်သိမ့်နေစေချင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အောက်ပါအချက်တွေကို လုပ်ဆောင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်
မီးဖွားရန် သတ်မှတ်ရက် မည်မျှလိုသေးကြောင်း ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စခရင်တွင် ရေတွက်ဖော်ပြ
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၁၀၁ – အစားအသောက်နှင့် ဆေးပညာအကြံပေးချက်များ
ကိုယ်အလေးချိန်၊ သွေးပေါင်ချိန်နှင့် ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်း
ဘာသာစကားများ -ထိုင်းနှင့် အင်္ဂလိပ်
လိုအပ်ချက်များ – iOS 6.0 နှင့် အထက်ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ iPhone၊ iPad နှင့် iPod touch များနှင့် အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ယခုအက်ပ်ကို iPhone5နှင့် အထက်အတွက် အကောင်းဆုံး ဖန်တီးထားပါသည်။
iPad အတွက် Samitivej စာကြည့်တိုက်
Samitivej စာကြည့်တိုက်မှာ ကျန်းမာရေးစာပေတွေကို ဖတ်ရှုခြင်း၊ ဝေမျှခြင်းနဲ့ မှတ်ချက်ပြုခြင်းတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အခမဲ့ အက်ပလီကေးရှင်းမှာ ရနိုင်တာတွေကတော့ –
ကျန်းမာရေး လစဉ်မဂ္ဂဇင်းAigle ကို ဖတ်ရှုနိုင်ခြင်း
မဂ္ဂဇင်းအကြောင်းအရာများအား ဒေါင်းလုပ်လုပ်ယူနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို သင်၏ စာအုပ်စင်ထဲတွင် သိမ်းထားနိုင်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဖိုးတန် အကြောင်းအရာတွေကို မှတ်ချက်ပေးခြင်းနှင့် ဖေ့စ်ဘွတ်တွင် ဝေမျှခြင်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယူကျုဗွီဒီယိုလိုင်းကို ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
ဆေးရုံကြီးရဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ၊ ကျန်းမာရေးဆောင်းပါးတွေနဲ့ ဆရာဝန်ရှာဖွေခြင်းတွေကို လွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အပြင်၊ မိခင်များအတွက် အထူးအကြောင်းအရာများပါ ပါဝင်ပါတယ်။
ဘာသာစကားများ – ထိုင်းနှင့် အင်္ဂလိပ်
လိုအပ်ချက်များ- iPad နှင့် အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ iOS 5.0 နှင့် အထက်ရှိရန်လိုအပ်သည်။
Samitivej ၏ ဂရုစိုက် စောင့်ရှောက်မှု
ဟောဒီ အခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အပလီကေးရှင်ကို အသုံးပြုပြီး Samitivej ဆေးရုံကြီးရဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ၊ ကျန်းမာရေးဆောင်းပါးတွေနဲ့ ဆရာဝန်ရှာဖွေခြင်းတွေကို လွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်
Samitivej ဆေးရုံကြီး၏ ဖုန်းကောစင်တာအား ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း သို့မဟုတ် လူနာတင်ယာဉ်ခေါ်ခြင်း
မြေပုံများနှင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆေးရုံများသို့ လမ်းညွှန်ခြင်း
အသုံးပြုခွင့် အထူးအခွင့်အရေးနှင့် အစီအစဉ်များ
ကျန်းမာရေး ဆောင်းပါးများ ဖတ်ရှုနိုင်ခြင်း
ဖုန်းထဲက ဆရာဝန်များ- သမားတော် ရှာဖွေခြင်း
သတင်းနှင့် အကြောင်းအရာများ- Samitivej မှာ ဘာတွေလုပ်နေလဲ
ကျွန်ုပ်၏ ကျန်းမာရေး မှတ်တမ်း
လိုအပ်ချက်များ- iPhone 3GS၊ iPhone 4၊ iPhone 4S၊ iPhone 5၊ iPod touch (3rd generation)၊ iPod touch (4th generation)၊ iPod touch (5th generation) နှင့် iPad တို့ လိုအပ်ပါသည်။ iOS 6.1 နှင့် အထက် ရှိရန်လိုအပ်ပြီး ယခု အက်ပ်ကို iPhone5အတွက် အဆင်ပြေစေရန်ပြုလုပ်ထားပါသည်။
Samitivej ၏ Sport Mobile Health
Samitivej ဆေးရုံကြီးရဲ့ Sport Mobile Health ကနေ သင့်ရဲ့ အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ကမ္ဘာ့အဆင့်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်တိုင်းတာနိုင်ဖို့ စွမ်းဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီအက်ပ်မှာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်တွေအနေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေအပြင်၊ ကောင်းမွန်တဲ့ သက်သာရာရကြောင်း လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း- လူကြီးမင်းကိုယ်တိုင် အနှစ်သက်ဆုံး အားကစားအပေါ်မှာ လူကြီးမင်းရဲ့ ကြွက်သားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း
အားကစားထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုနှင့် ပြန်လည်ကျန်းမာခြင်း- ကုသရေးဆိုင်ရာနှင့် အရိုး၊ ကြွက်သားများဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမှ ကာကွယ်ခြင်း အကြံပြုချက်များ
အားကစားနှင့် အရိုးကုဆရာဝန်- အားကစားနှင့် အရိုးအထူးကုပါရဂူ ရှာဖွေခြင်း
ဈေးနှုန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်များ- ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အားကစားနှင့် အရိုးထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ
iOS အတွက် Dr. Carebear ဂိမ်း
1. Dr. Carebear ကို သင်သွားလိုသည့် နေရာသို့ သွားစေရန် စခရင်ပေါ်ကို သင့်ရဲ့ လက်ချောင်းဖြင့် ထိပွတ်၍ ညွှန်ပြပေးပါ
2. Dr. Carebear ကို “Bear Power Cards,” တွေ ရရှိစုဆောင်းနိုင်ဖို့ ကူညီပေးပါ ဒါပေမယ့် ရောဂါပိုးတွေရဲ့ အဝေးမှာ ရှိနေအောင်တော့ သေချာလေး သတိပြုရပါမယ်
3. သင့်ကိုယ်သင် ရောဂါပိုးတွေရဲ့ အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ကာကွယ်ဆေးကို ရအောင်ယူပါ.
ဘာသာစကားများ- ထိုင်းနှင့် အင်္ဂလိပ်
လိုအပ်ချက်များ- iPhone နှင့် အဆင်ပြေစွာဆော့ကစားနိုင်သည်။ iOS 5.0 နှင့် အထက် လိုအပ်ပါသည်။.
Manovadee Sarapanich, D.D.S.
Surapon Worapongpaiboon, M.D.
Kamolchanok Diewsurin, D.D.S.